दु:खद खबर!! ?? कुवेतमा चार नेपालीको मृ’त्यु भएको पुस्टि…हेर्नुहोस!
काठमान्डौ ,कुवेतको अल–मुत्ला क्षेत्रको एक निर्माणस्थलमा कार्यरत चार नेपालीको ज्या’न गएको छ । अरब टाइम्सका अनुसार निर्माणस्थलमा कार्यरत उनीहरुमाथि बालुवा र ग्राभल खस्दा मृ’त्यु भएको हो । सो दु’र्घटनामा अन्य तीन जना कामदार ह’राइरहेका छन् ।
उनीहरुको परिचय भने खुलाइएको छैन ।समाचारमा ज्या’न गु’माएका नेपालीहरु त्यहाँको चिनियाँ कम्पनीमा कार्यरत थिए । ब्लक १, एन फाइभमा काम गर्ने क्रममा उनीहरुमाथि बालुवा र ग्राभल ख,सेको थियो । घ’टनास्थलबाट सातजनाको उ’द्धार गरिएको थियो ।
घ’टनालगत्तै त्यहाँ २० वटा एम्बुलेन्स तथा जहरा फायर स्टेसन र टेक्निल रे’स्क्यु सेन्टरका उ’द्धारकर्ता पुगेर तत्कालै उ’द्धारको काम सुरु गरेका थिए ।जसमा ४ जनाको मृ’त्यु भएको थियो । अन्य तीन जनालाई तत्कालै जहरा अ,स्पताल लगिएको छ ।
उनीहरुको अवस्था पनि चि’न्ताजनक रहेको बताइएको छ । थप तीनजनाको खोजी कार्य जारी रहेको छ ।यता, स्टेट मिनिस्टिर फर हाउसिङ अफेयर्स डा. राना अल फारिसले घ’टनाबारे एक छा’नविन समिति ग’ठन गरेर जाँ’च गर्न निर्देशन दिएकी छन् । उनले यसबारे स,त्यतथ्य पत्ता लगाएर दो’षीमाथि का’रवाही गरिने बताएकी छिन् ।